Maalinta: Meey 5, 2017
Bam lagu weeraray tareenka boostada ee Bingöl
Weerar Bambaano oo lagu qaaday Tareenka Boostada ee 'Bingöl': argagixisada PKK waxay ku weerareen tareenka laga soo bilaabo degmada da 'yarta ee Bingöl ilaa Tatvan iyaga oo wata walxaha qarxa. Tareenka ma uusan dhiman mana dhaawicin. Degmadda da 'yarta ee Bingöl [More ...]
Calaamadaha laba xarumood oo cusub oo mitrooga ah ee Istanbul
Istambul waxay saxeexday laba wado oo tareen oo cusub: Dawlada Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay qaaday talaabo kale oo weyn oo kusaleysan hadafkeeda metro metro meelwalba, metro meel walba ”. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli iyo Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan ayaa fududeyn doonta gadiidka dhanka Anadrol [More ...]
Codsiyada TCDD Camp Completed
Codsiyada kaamka TCDD ayaa la soo gabagabeeyey: natiijooyinka codsigii sannadka ee xerada 2017 waxaa shaaca ka qaaday Agaasimaha Guud ee Waddooyinka Tareenka Waddooyinka (TCDD) ee Jamhuuriyadda Turkiga. Republic of Turkey General Directorate of xerada Tareennada State by sano natiijada tixraaca 2017 [More ...]
ETA-yada waxaa xereyn doona ANKARAKART: Tigidhada elektaroonigga ah waxaa lagu wareejiyaa nidaamka AK ANKARAKART ”ee gawaarida xadiidka gaarka loo leeyahay ee 168 (ÖTA) ee u adeegaya khadka Sincan-Ulus-Kızılay. Codsiga, 15 wuxuu bilaaban doonaa Isniinta ilaa Maajo. Magaalada [More ...]
Diyaargarowga Dhismaha Dhismooyinka Karaman ee Bilowga: Mashruuca Xarunta Saadka, oo aad muhiim ugu ah koritaanka iyo horumarka warshadaha Karaman iyo dhaqaalaha, wuxuu soo marey Gudiga kormeerka ee Wasaaradda Horumarinta iyo Wasaaradda Gaadiidka. [More ...]
Shiki-Shima oo Japan ah ayaa bilaabay tareenkiisii ​​ugu horeeyay ee tayo leh
Shiki-shine Japan tareenka aadka u qaaliga ah ayaa safarkiisii ​​ugu horreeyay: 1 ee Japan Tareenka shiki-shiite ee rakaabka ah ee loo yaqaan '10', kaas oo bilaabay duulimaadyadiisa bishii May, wuxuu ahaa mid aan fiicnayn oo qiimaha tikidhada ilaa kun doolar ah. Shiki-bashi taite suite in Japan [More ...]
Go'aanka deg-degga ee loogu talagay 1915 Çanakkale Bridge: Agaasinka guud ee wadooyinka ayaa goaansaday in laga qaado qaar kamid ah gawaarida mashruuca wadooyinka ee Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Bridge Bridge ee 1915 Çanakkale Bridge. Ay ku jiraan 1915 Çanakkale Buundada ee Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Mashruuca Wadada [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya Sare u qaadis Balaaran: Gaadiidka dadweynaha ee Antalya ee Magaalo Weynaha Dawladda Hoose ayaa kordhay qiyaastii boqolkiiba 25. Kadib socodka dadweynaha ee sanadkii hore, shacabka ayaa dareemay ficil celin weyn. 7 May [More ...]
TCDD Qoysaska R & D Wada-shaqeynta Shirarka iyo Cadaaladda: Wada Qaadashada Shirweynaha Wada-tashiga iyo Wada-hadalka 'Fair' oo lagu abaabulay isuduwidda ugu weyn ee TCDD oo ay la socdaan mowduuca AR R & D Wada-shaqeynta Nidaamyada Wax-soo-saarka ee mustaqbalka "ayaa lagu qaban doonaa 03-05 May 2017 [More ...]
Duqa magaalada Kütahya Saraçoğlu ayaa booqday Agaasimaha Guud ee TCDD Murat Kavak
Duqa magaalada Kütahya Saraçoğlu wuxuu booqday ku xigeenka maareeyaha guud ee TCDD Murat Kavak: Duqa magaalada Kütahya Kamil Saraçoğlu wuxuu booqday ku xigeenka maareeyaha guud ee TCDD Murat Kavak. Dadka reer Kütahya dhib kuma qabaan taraafikada inta booqashada lagu jiro [More ...]
RayHaber 05.05.2017 Warbixinta Shirka
Hagaajinta Gaadiidka Wadooyinka iyo Dhismaha Dhexdhexaadinta Inta u dhaxaysa Labehan-Pozantı Stations
10 line-ka khadka baabuurta ee laga dhiso Istanbul
10 ropeway in laga dhisi doono Istanbul: IMM waxay qorsheyneysaa in ay ka dhisto xarig 2019 10. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa qaaday talaabo loogu talagalay mashaariicda gawaarida gawaarida cusub. 2019 ilaa 10 [More ...]
TCDD 7. Maamulaha Gobolka Adem Isri Isparta wuxuu kormeer ku sameeyay Egirdir
TCDD 7. Maareeyaha Gobolka Adem Sivri wuxuu baaritaan ku sameeyay khadka Isparta Egirdir: TCDD Afyonkarahisar 7. Agaasimaha Gobolka Adem Sivri iyo wafdigiisa ayaa booqday khadka taariikheed ee Isparta Egirdir oo laga dhisay 1912. [More ...]
İsa ApaydınMaqaalkan Raillife 'Daabacaadaha Waxyaabaha Soo Saarista gudaha iyo Qaran' ayaa la daabacay
İsa ApaydınMaqaalka 'Raillife' '' Wadooyinka abaabulka wax soo saarka ee maxalliga ah iyo qaran ahaanta 'maqaalka ayaa la daabacay: Sanadihii la soo dhaafay, waddankeenna wuxuu bilaabay abaabulka wax soo saarka heer qaran iyo mid qaran oo si xawli ah ku socda. Muhiimadda la siinayo wadooyinka tareenka [More ...]